လတ်တလော အခြေအနေတွေ ကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့ အခါမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ကို ရေးသား ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လတ်တလော အခြေအနေတွေ ကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့ အခါမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ကို ရေးသား ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်
လတ်တလော အခြေအနေတွေ ကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့ အခါမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ကို ရေးသား ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်
သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင်ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ရရှိလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ အလှူအတန်းတွေလည်း အမြဲလိုလို လှူဒါန်းသူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းက အားကျ အတုယူနေကြတာပါ။ သူမကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။.
ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းကနေ ယနေ့ချိန် အထိ ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကြိုးစားပမ်းစား Speak Out လုပ်ပေးနေတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးခြင်းတွေကို ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများလည်း လှူဒါန်းပေးနေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ခေးဆက်သွင်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့ အခါ စိတ်ချယုံကြည်တဲ့ သူထံတွင်သာ လှူဒါန်းသင့်ကြောင့် ရေးသား ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း “အလှူတွေလှူတဲ့အခါ အလှူခံပြီး တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူတွေက လုံခြုံရေးအရရော အသက်အန္တရာယ်အတွက်ရော တချို့မှတ်တမ်းတင်မပေးတာ အသေးစိတ်မဖော်ပြပေးနိုင်တာရှိပါလိမ့်မယ် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမျိုး လိုအပ်နေတဲ့သူတွေလက်ထဲအရောက် ထည့်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးဆီမှာ စိတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့လှူတာကောင်းပါတယ်… အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လက်ကလှူတာ ညာလက်မသိကြပါစို့ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်တော့မှ ဒို့ကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘယ်လောက်လှူခဲ့လဲဆိုတာ ကြွားတော့မယ်ကွာ ” ဆိုပြီး လက်ရှိမှာ လုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြောပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိရအောင် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေခးဆက္သြင္ကေတာ့ ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးဝန္းရံျခင္းကို ရရွိလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုေဆာင္းထားတဲ့ အႏုပညာေၾကးေတြနဲ႔ အလႉအတန္းေတြလည္း အၿမဲလိုလို လႉဒါန္းသူတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ လူတိုင္းက အားက် အတုယူေနၾကတာပါ။ သူမကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာပါ။.
ေဖေဖာ္ဝါရီလအစပိုင္းကတည္းကေန ယေန႔ခ်ိန္ အထိ ဒီလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ႀကိဳးစားပမ္းစား Speak Out လုပ္ေပးေနတာေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးျခင္းေတြကို ရရွိထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလည္း လႉဒါန္းေပးေနတာပါ။ မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း ေခးဆက္သြင္ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အလႉေတြ လႉတဲ့ အခါ စိတ္ခ်ယုံၾကည္တဲ့ သူထံတြင္သာ လႉဒါန္းသင့္ေၾကာင့္ ေရးသား ေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမကလည္း “အလႉေတြလႉတဲ့အခါ အလႉခံၿပီး တစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကတဲ့သူေတြက လုံၿခဳံေရးအရေရာ အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ေရာ တခ်ိဳ႕မွတ္တမ္းတင္မေပးတာ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေပးႏိုင္တာရွိပါလိမ့္မယ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူမ်ိဳး လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြလက္ထဲအေရာက္ ထည့္ေပးႏိုင္တဲ့သူမ်ိဳးဆီမွာ စိတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔လႉတာေကာင္းပါတယ္… အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘယ္လက္ကလႉတာ ညာလက္မသိၾကပါစို႔ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေအာင္ေတာ့မွ ဒို႔ကေတာ့ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ ဘယ္ေလာက္လႉခဲ့လဲဆိုတာ ႂကြားေတာ့မယ္ကြာ ” ဆိုၿပီး လက္ရွိမွာ လုပ္သင့္တဲ့ အရာေလးေတြကို ေျပာျပလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိရေအာင္ ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post (၄) လပိုင်း နှင့် နိုင်ငံ ရေး အခြေ အနေ TAROT ဟောစာတမ်း
Next post ကမ္ဘာ မှာ ဘယ်နိုင်ငံ မှ မရှိတဲ့ စိတ်ထားတွေ ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်